प्रियंका कार्कीको कार्तिकमै बज्यो बाजा ! - Everest Dainik - News from Nepal
प्रियंका कार्कीको कार्तिकमै बज्यो बाजा !
२०७५, १७ कार्तिक शनिबार
काठमाडौ,कार्तिक १७।बिबाहकाे महिना मंसिर आउदैछ तर चर्चित नायिका प्रियंका कार्किकाे बाजा भने कात्तिकमै बजेकाे छ । यो बाजा कार्कीको बिबाहकाे नभइ चर्चित गायक हिमाल सागरकाे स्वरमा सजिएकाे गित “बाजा´´ बजेकाे हाे ।
जुन गितमा मोडल सुनिल क्षत्री संगै प्रियंका कार्किलाई छमछमि नाचेको देख्न सकिन्छ ।
गित बाग्लुङ घर भै हाल अमेरिकामा बस्दै अाएका कलाकार अमर थापाले ह्वाइट प्राेडक्सन मार्फत बजारमा ल्याएका हुन ।
अमर थापाकाे शब्द रहेको गितमा अर्जुन पाेखरेलकाे संगित भरेका छ्न । महराज थापाले एरेन्ज गरेको गितलाई सुब्रत अाचार्यले निर्देशन गरेका हुन भने उत्सब दाहालले छायांकन ।
चर्चित नायिका कार्किकाे साथमा मोडल सुनिल क्षेत्रीको नृत्यले उत्कृष्ट बनेको गितमा मोडल क्षत्री र नेपाली ठिटोजको आकर्षक कोरियोग्राफि देख्न सकिन्छ ।
याे पनि पढ्नुस प्रियंकालाई आयुष्मानको टक्कर!
ट्याग्स: प्रियंका कार्की